သူ၏လူမျိုးများနှင့်ဘုရားသခင့်ဆက်ဆံရေး - Worldwide Church of God Switzerland
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2018-01 > မိမိလူတို့ကိုနှငျ့ဘုရားသခငျကြားဆက်ဆံရေး
သရေလလူမျိုး၏သမိုင်းကိုရှုံးနိမ့်ခြင်းဟူသောစကားလုံးဖြင့်သာဖော်ပြနိုင်သည်။ Mosesသရေလလူမျိုးနှင့်ဘုရားသခင့်ဆက်ဆံရေးကိုမောရှေကျမ်းတွင်ပcovenantိညာဉ်အဖြစ်ဖော်ပြထားပြီးသစ္စာရှိမှုနှင့်ကတိတော်များရရှိထားသည်။ သို့သော်သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြချက်အရIsraelitesသရေလလူမျိုးပျက်ကွက်သည့်အဖြစ်အပျက်များစွာရှိခဲ့သည်။ သူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမယုံ။ ဘုရားသခင်၏အမှုတော်များကိုစိတ်မ ၀ င်စားကြပါ။ သူတို့၏ပုံမှန်မယုံကြည်မှုနှင့်မနာခံမှုအပြုအမူသည်Israelသရေလလူမျိုး၏သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်ရှိသည်။
ဘုရားသခင်၏သစ္စာရှိမှုသည်peopleသရေလလူမျိုး၏သမိုင်းတွင်ထင်ရှားပေါ်လွင်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ကြီးမားသောယုံကြည်မှုရရှိသည်။ ဘုရားသခင်သည်ထိုအချိန်ကမိမိ၏လူမျိုးတော်ကိုငြင်းပယ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်ကွက်ချိန်များ၌ပင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုငြင်းပယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မကောင်းသောရွေးချယ်မှုများကြောင့်နာကျင်မှုနှင့်ဝေဒနာခံစားရခြင်းတို့ကိုကြုံတွေ့ရနိုင်သည်၊ သို့သော်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တော့မည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်တို့မစိုးရိမ်ပါ။ သူအမြဲသစ္စာစောင့်သိတယ်
ပထမ ဦး ဆုံးကတိ: ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး
တရားသူကြီးများလက်ထက်တွင်၊ အစ္စရေးတို့သည် မနာခံမှု-ဖိနှိပ်မှု၊ နောင်တ- လွတ်မြောက်ခြင်းသံသရာတွင် အဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့သည်။ ခေါင်းဆောင်ကြီး ကွယ်လွန်ပြီးနောက် သံသရာတစ်ခုလုံး ပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့သောအဖြစ်အပျက်များစွာပြီးနောက်တွင်၊ လူများသည် ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်သည့် တော်ဝင်မိသားစုတစ်ခုအတွက် ပရောဖက်ရှမွေလအား နောင်လာနောက်သားများကို ဦးဆောင်ရန် သားစဉ်မြေးဆက်များ အမြဲရှိနေစေရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်က ရှမွေလကို ရှင်းပြတယ်– “သူတို့က မင်းကို ငြင်းပယ်တာမဟုတ်ဘူး၊ ငါက သူတို့ကို အုပ်စိုးတဲ့ ဘုရင်ဖြစ်ခွင့်မပေးဘူး။ ငါသည် အဲဂုတ္တုပြည်မှ နှုတ်ဆောင်သောနေ့မှစ၍ ယနေ့တိုင်အောင် အမြဲပြုသည်အတိုင်း သင်တို့၌ ပြုကြလိမ့်မည်။1. ဆမ် 8,7-၈)။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏ မမြင်နိုင်သော လမ်းပြဖြစ်ခဲ့သော်လည်း လူများက သူ့ကို မယုံကြည်ခဲ့ကြပေ။ ထို့ကြောင့်၊ ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို ဖျန်ဖြေသူအဖြစ် အစေခံရန် လူတစ်ဦးကို ပေးခဲ့ပြီး၊ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်စား လူများကို အုပ်စိုးနိုင်သည်။
ပထမဘုရင်ရှောလုသည်ဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်သောကြောင့်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ရှမွေလသည်ဒါဝိဒ်ကိုဘိသိက် ပေး၍၊ ဒါဝိဒ်သည်သူ၏ဘ ၀ တွင်အဆိုးဆုံးနည်းလမ်းများတွင်ကျရှုံးခဲ့သော်လည်းသူ၏အလိုဆန္ဒသည်ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရန်အဓိကရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ သူသည်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်သာယာဝပြောမှုကိုသေချာစွာရရှိနိုင်ခဲ့ပြီးယေရုရှလင်မြို့၌ဗိမာန်တော်ကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ဘုရားသခင်အားသူအားကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည်တိုင်းပြည်အတွက်သာမကစစ်မှန်သောဘုရားသခင်အားဝတ်ပြုရေးအတွက်ပါအမြဲတမ်းသင်္ကေတဖြစ်သင့်သည်။
ဟေဗြဲစကားလုံးဖြင့် ဘုရားသခင်က “မဟုတ်ပါ၊ ဒါဝိဒ်၊ သင်သည် ငါ့ကို အိမ်တစ်လုံးဆောက်မည်မဟုတ်။ ဒါဝိဒ်မင်းမျိုး အိမ်ကို ငါဆောက်မယ်။ ထာ​ဝ​ရ​တည်​မြဲ​မယ့်​နိုင်​ငံ​ရှိ​ပြီး မင်း​ရဲ့​သား​မြေး​တစ်​ယောက်​က ငါ့​အတွက် ဗိ​မာန်​တော်​ကို တည်​ဆောက်​မယ်။"2. ဆမ် 7,11-၁၆၊ ကိုယ်ပိုင်အကျဉ်းချုပ်)။ ဘုရားသခင်သည် ပဋိညာဉ်ပုံသေနည်းကို အသုံးပြုသည်– “ငါသည် သူ၏အဘဖြစ်မည်။ သူသည် ငါ့သားဖြစ်လိမ့်မည်” (း၁၄)။ ဒါဝိဒ်၏နိုင်ငံတော်သည် ထာဝရတည်တံ့မည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည် (း၁၆)။
သို့သော်ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်ပင်လျှင်ထာဝရမတည်ခဲ့ပါ။ ဘာသာရေးအရရော၊ ဘုရားသခင့်ကတိတော်ဘာဖြစ်လာပြီလဲ။ Israelသရေလလူတို့အားပေးသောကတိတော်များသည်ယေရှု၌ပြည့်စုံခဲ့သည်။ သူသည်ဘုရားသခင့်လူမျိုးတော်နှင့်ဘုရားသခင့်ဆက်ဆံရေးအလယ်ဗဟိုတွင်ရှိသည်။ လူများရှာဖွေသောလုံခြုံရေးသည်အမြဲတည်ရှိပြီးအမြဲတမ်းသစ္စာရှိသူတစ် ဦး မှသာတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ofသရေလလူမျိုး၏သမိုင်းသည်Israelသရေလလူမျိုးထက် ပို၍ ကြီးသောအရာတစ်ခုသို့ညွှန်ပြသော်လည်း၎င်းသည်ofသရေလသမိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒုတိယကတိတော် - ဘုရားသခင်ရောက်ရှိခြင်း
ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ ၏ စွန့် ခွါ လှည့် လည် ခြင်း တွင်၊ ဘုရားသခင် သည် တဲ တော် ၌ ကျိန်း ဝပ် တော် မူ သည်-၊2. ဆမ် 7,6) ရှောလမုန်၏ဗိမာန်တော်ကို ဘုရားသခင်ကျိန်းဝပ်ရာအသစ်အဖြစ် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး “ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်သည် ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်နှင့် ပြည့်စေသည်” (2. ဘီစီ 5,14) ကောင်းကင်ဘုံနှင့် ကောင်းကင်ဘုံသည် ဘုရားသခင်ကို မဆံ့နိုင်တော့ကြောင်း လူတို့သိထားသောကြောင့် ယင်းကို ပုံဆောင်သဘောဖြင့် နားလည်ရန်ဖြစ်သည်။2. ဘီစီ 6,18).
ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့တွင် ထာဝစဉ်နေမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။1. ဘုရင် 6,12စာ-၁၃)။ သို့ရာတွင်၊ သူတို့သည် ကိုယ်တော်ကို မနာခံသောကြောင့်၊ ကိုယ်တော်သည် “သူတို့ကို မျက်နှာတော်မှ ဖယ်ရှားပစ်မည်” ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။2. ဘုရင်များ ၁4,3ဆိုလိုသည်မှာ၊ သူသည် ၎င်းတို့အား အခြားနိုင်ငံသို့ သိမ်းသွားစေခဲ့သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် သူ၏လူများကို မငြင်းပယ်ဘဲ သစ္စာရှိခဲ့သည်။ သူ့နာမည်ကို မဖျက်ဘူးလို့ ကတိပေးတယ်။2. ဘုရင်များ ၁4,27) သူတို့သည် တိုင်းတစ်ပါး၌ပင် နောင်တရ၍ သူ၏ရင်းနှီးမှုကို ရှာဖွေကြလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ပြန်လှည့်လျှင် သူတို့၏ ဆက်ဆံရေး ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကို သင်္ကေတအဖြစ်လည်း ရည်ညွှန်းသည့် အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်သည့် သူတို့၏ပြည်သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်မည်ဟု ဘုရားသခင်ကတိပြုခဲ့သည်။5. ကမ္ဘာဦး 30,1:5; နေဟမိ 1,8-9) ။
ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်အား ကတိပြုခဲ့သည်– “ငါ၏လူဣသရေလအမျိုးကို ငါပေး၍ စိုက်ပျိုး၍ နေစေမည်ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ သူတို့သည် နောက်တဖန် မပူပန်စေဘဲ၊1. Chr ၁7,9) အစ္စရေးပြည်နှင်ဒဏ်ခံရပြီးနောက် ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်တွင် ဤကတိသည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းလှသည်။ ဣသရေလလူတို့၏သမိုင်းသည် ၎င်းတို့၏သမိုင်းကိုကျော်လွန်၍ ညွှန်ပြသည်- ၎င်းသည် ကတိတော်မပြည့်စုံသေးပါ။ လူမျိုးသည် ဒါဝိဒ်မှဆင်းသက်လာသော ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း ဒါဝိဒ်ထက်ကြီးမြတ်သည်။ ဗိမာန်တော်တစ်ခုတွင် သင်္ကေတပြုရုံသာမက လူသားတိုင်းအတွက် အမှန်တကယ်ဖြစ်လာမည့် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်ကို လိုအပ်ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် သာယာဝပြောမှုတို့ မတည်မြဲဘဲ ဖိနှိပ်မှုများ ထပ်မံမဖြစ်စေရန် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ပြောင်းလဲပစ်ရန် လိုအပ်သည်။ အစ္စရေး၏ သမိုင်းသည် အနာဂတ်အဖြစ်မှန်ကို ထောက်ပြသည်။ ဒါပေမဲ့ ရှေးခေတ်အစ္စရေးမှာလည်း အဖြစ်မှန်တစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလအမျိုးနှင့် ပဋိညာဉ်ဖွဲ့ပြီး သစ္စာရှိစွာ စောင့်ရှောက်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် မနာခံသည့်တိုင် သူ၏လူများဖြစ်သည်။ လူများစွာတို့သည် မှန်ကန်သောလမ်းမှ လွဲခဲ့ကြသော်လည်း ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်ခဲ့ကြသူများလည်း ရှိခဲ့သည်။ ပြည့်စုံမှုကို မမြင်ဘဲ သေဆုံးသွားကြသော်လည်း၊ ခေါင်းဆောင်၊ တိုင်းပြည်နှင့် အကောင်းဆုံးသော ကယ်တင်ရှင်ကို တွေ့မြင်ရပြီး သူ့ထံတော်၌ ထာဝရအသက်ရရန် တဖန်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်။